A na-ewepụ ihe mgbochi n’isi n’otu n’otu | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraWepụ ihe isi ike otu site na Otu n'ime Isi Obodo
24 / 07 / 2012 06 Ankara, ỤWA, General, Isi akụkọ, Turkey
Obodo ukwu nke Ankara, site na pavement ruo ọdụ ụgbọ ala, ọdụ ụgbọ oloko na ụlọ ọrụ, ogige gaa AŞTİ n'ozuzu obodo ahụ iji mee ndokwa iji dozie ndụ ndị nwere nkwarụ. N'aka nke aka, ìgwè ndị na-akwado rampụ maka crossing oche, n'akụkụ nke ọzọ maka ndị nwere nkwarụ na pavrị ahụ na-arụ ọrụ dị mma.
38 bin 175 bi na Ankara, obodo ukwu nke obodo, nke na-agbalị iji wepu ihe mgbochi na ndụ site na ngwa ndị dị ka nnwere onwe nke njem, nkwado nke ahụike, ebe obibi, usoro ọmụmụ ọrụ maka ndị nwere nkwarụ, amalitela nchịkọta ọnụ ọgụgụ obodo dum, ụzọ ndị dị n'okporo ámá na boulevards, n'okporo ụzọ dị elu na nke ala. Ebe nfegharị, ogige ntụrụndụ, ụlọ mposi na ogige ntụrụndụ, ụlọ ọrụ, AŞTİ, ụgbọ ala na ọkụ ọkụ ọkụ na-eme ndokwa ọhụrụ. Obodo ukwu obodo Urban Aesthetics, bụ nke malitere ịrụ ọrụ site na mpaghara mbụ na-agafe agafe na isi obodo ahụ, na-azụgharị okporo ụzọ n'okporo ámá na n'okporo ámá ụzọ maka ndị niile na-agafe agafe na ndị nwere nkwarụ iji jiri ha dị mfe. Ihe mgbochi dịka tiketi ụlọ ọrụ, nkpuchi, ogwe ọkụ, oghere ntụpọ, ntụpọ ntụziaka, nke na-ebelata mkpali nke ụmụ amaala n'okporo ámá na boulevards, na-arụ ọrụ na ngalaba na ụlọ ọrụ ndị metụtara yana wepụrụ ma ọ bụ kwaga n'ebe kwesịrị ekwesị. Ndị otu na-etinye aka na teepu na-agafe na ndị na-agafe agafe na ndị na-agafe agafe na-anọgide na-arụ ọrụ ha site na Kızılay na Ulus ka ha nwee nkwarụ nkwarụ jikọtara ya na ụkpụrụ na ime ọhụụ ọhụrụ. Ndị otu, n'okporo ámá ndị dị n'okporo ámá na ndị na-emegharị anya na-ele ụmụ amaala anya ka ha na-agafe ngwa ngwa ka ha nwee ike ịrụ ọrụ dị mma. Obodo ukwu nke obodo, nke tinyelarị elevator 60 ka ọ bụrụ ọrụ na onye na-agafe agafe ka ha wee nwee ike ịgafe okporo ụzọ maka ndị nwere nkwarụ, ndị agadi na ndị inyom dị ime, kpochapụrụ bọtịnụ maka iwu ụlọ elu ahụ gaa na 18.
OBSTACLES na-echere na AŞTİ
Na mmemme ndị a rụrụ na AŞTİ, Ụlọ Ọrụ Cultural na Ndị Ntorobịa, e mere ndokwa dị mkpa maka nsogbu ahụ. Site na ntanetị ekwentị inyeaka nyere aka na isi ihe dị iche iche, ụmụ amaala nkwarụ nwere ike ịkpọ ndị nduzi ọrụ ma soro ha n'ebe ọ bụla ha chọrọ. A na-etinye mbadamba Braille na Latịn na mbadamba, ndụmọdụ, escrow, ndị uweojii, cafeteria, ebe ndị na-emepụta ihe dị ka ogige dị mkpa. Tụkwasị na nke a, maka ndị na-adịghị ahụ anya, mgbe ha na-eme ụzọ nkwụsị ụkwụ na-eche ihu na njedebe na AŞTİ, a na-akọwapụta mkpụrụedemede mkpụrụedemede braille n'ime ọnụ ma na-egosi ndị nwere nkwarụ ụzọ ahụ.
Obodo ukwu obodo na-eme ndokwa dị mkpa maka ndị nwere nkwarụ na ogige ntụrụndụ. N'aka ogige, ụzọbata, obosara nke ụzọ ụzọ, ụzọ dị elu, nkume na-awụda na mpempe akwụkwọ, a na-eweta ihe ndị dị mma maka ndị nwere nkwarụ na-eji oche oche. Ọ bụ ezie na e guzobere ọtụtụ ebe egwuregwu maka ụmụ amaala nkwarụ na ọtụtụ ogige, a na-edebe ụlọ mposi iji kwado ụkpụrụ nwoke na nwanyị.
Ụlọ Nzukọ Obodo Obodo Ukwu ga-abụ ihe atụ nke ụlọ ọha na eze na ụkpụrụ maka ndị nwere nkwarụ. Ọ bụ ezie na nkwadebe maka itinye ihe mgbochi mberede, ụlọ mposi na ihe ịrịba ama ziri ezi maka ụlọ ndị ahụ maka ụlọ ahụ na-aga n'ihu, ụlọ mposi nwere nkwarụ na ala ọ bụla, ederede, ihe ọkụkụ, ozi ndị a na-anụ ihe na oku na-akpọ ndị na-ebuli elu na-adabere na nrubeisi ha.
NKWỤKWU ỤLỌ Ị GA-EME
Na Ankaray na Ankara ala ụgbọ oloko, a na-eji usoro nlezianya edozi anya iji nye ụmụ amaala na-ahụ anya na-abanye na ọdụ ahụ site na ebe ọ bụla. A na-ezubere oru a iji wụnye mita 623 square mita ala, 11 bin 500 mita ntuziaka na mita 968 maka ịdọ aka ná ntị mita mita iji gbochie nsogbu ihu ahụ ịdaba na rails. Na mgbakwunye na eletrik 54 na ọdụ ụgbọ ahụ, a ga-atụkwasị ogwe 24 na ọdụ ndị achọrọ, yana sụgharịrị 4 na 18 n'elu ikpo okwu ụdị ikuku.
AGBANYE ECHICHE IHE BUSE
Enwere ike ịnweta kaadị akwụmụgwọ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ na ụgbọala ndị njem ọha na eze, ohere nnwere onwe nke ụmụ amaala nwere nkwarụ na ọdịdị ozi ọma ahụ ka na-aga n'ihu. Na 70 ụgbọ ala nsoro na ugbo ala na a nwere nkwarụ inwego otu ihe atụ nke Metropolitan Municipality na Turkey nnọọ anya 250 ọhụrụ ala-n'ala articulated ụgbọ ala ga tinye ndị a ugbo ala. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eme mgbalị iji hụ na ụgbọ mmiri ahụ dum ruru ebe a na-enweghị nkwarụ. Tụkwasị na nke ahụ, nkwadebe maka ịnye ozi ọdịyo na vidiyo maka ịnụrụ ntị na ndị na-ahụ anya ụmụ amaala nọ na bọs ma na-echere bọs na nkwụsị na-amalite. General Directorate of Transportation Department, nke na-eme ka ndị na-agafe agafe na-agafe agafe na-agafe na 42, na-eme ka ogologo oge nke usoro mgbaàmà na-adaba na onye na-agafe ngwa ngwa.
Wepụ 'ihe mgbochi' na njem
Ejiri Iju Mmiri Gburuo Azụ Azụ Azụ Azụ
Ihe mgbochi bụ ịhapụ nnukwu (PhotoGaleri)
Nsogbu na ọdụ ụgbọelu
Nsogbu n'ihu Canal Istanbul
Ihe isi ike na-ebili na njem
Nsogbu na njem na Gaziantep
Ihe mgbochi na njem obodo
Imeri ihe isi ike na ogwe
Sabiha Gokcen na ụgbọ elu dị elu na-egbochi ụgbọ elu si Yenisehir!
Ụgbọ njem ndị njem
Çuf Çuf Kemal Site na ihe ngosi okporo ụzọ okporo ígwè
Red mpekere onwa
nkwụsị ụgbọ ala
Ngalaba Na-ahụ Maka Nrụpụta Ụgbọ okporo ígwè Karabuk University
Taa na History: 25 July '2 Ağüstos 1925 N'oge Süleyman Sırrı Bey Deputy nke Nafia Temmuz
Sincan-Kayaş commuter ọrụ ụgbọ oloko malitere na isi obodo
Emere Nzọụkwụ mbụ maka Nnukwu Bzọ Igwe Ọdụdọ na Isi Obodo
Ebufela Transportgbọ njem nke Freemụ amaala n'efu 65 afọ na karịa na Isi Obodo ..!